အခု Globalization အရ ဆန္ဒပြတာတွေဟာ ပြည်သူတွေအကြား ပြိုင်ပွဲလိုဖြစ်နေဘီ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အခု Globalization အရ ဆန္ဒပြတာတွေဟာ ပြည်သူတွေအကြား ပြိုင်ပွဲလိုဖြစ်နေဘီ။
အခု Globalization အရ ဆန္ဒပြတာတွေဟာ ပြည်သူတွေအကြား ပြိုင်ပွဲလိုဖြစ်နေဘီ။
Posted by politicalview on Feb 16, 2011 in Drama, Essays.., Myanma News, News, Society & Lifestyle |4comments
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ပြည်သူတွေ နိုးကြားဖို့အချိန်တန်နေဘီ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အရှေ့အလယ် ဂယက် ဟာတော်တော်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာခဲ့ဘီ။ တူနီးရှား ကနေစလိုက်တာဟာ အီဂျစ်၊ လစ်ဗျား၊ အီရန်တို့ကို ပါကူးစက်ကုန်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ အီဂျစ်နဲ့ တူနီးရှားတို့ရဲ့အခြေအနေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေအားလုံးနီးပါးပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကျတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ၂၀၀ရ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ခဲ့တုန်းက အရေးခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာက ကိုရီးယားကား တရုတ်ကား နဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေ အကြည့်မပျက်ကျဘူး။ အခုတစ်ခေါက် က တော့ အခုလတ်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပုံစံကို နမူနာယူသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း တစ်ယောက်မကျန် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့မယ် ဆိုရင် ဘယ်အစိုးရမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ မမြင်ရတဲ့ အရပ်ဝတ် အစိုးရလူတွေ ခေါ် စွမ်းအားရှင်လိုမျိုးရှိပေမယ့် ပြည်သူတွေသာလက်တွဲညီညီ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကိုချွင်းချက်မရှိရမယ်လို့အသေအချာတပ်အပ်ပြောနိုင်ပါတယ်။
အီဂျစ်မှာ ဆန္ဒပြခဲ့တုန်း ကညပိုင်း ပါ ကမ့် တွေထိုး ဆန္ဒပြခဲ့ကျတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က ပြည်သူတွေ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြဖို့ အချိန်တန်ဘီလို့မြင်မိပါတယ်ဗျာ။
၈၈ တုန်းက ကောင်းကောင်းမီခဲ့တာပေါ့။ အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင် ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာ အကွဲအပြဲတွေရှိခဲ့ပြီး
အစိုးရတဖွဲ့လုံးအကြိမ်ကြိမ်ပြုတ်ကြတာတောင် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ သံဃာ့ အရေး ရွှေဝါရောင်မှာလည်း
ပထမ သံဃာတွေက လူတွေဝင်မပါကြဖို့ပြောသေးတယ်။ လွှဲချော်မှုတွေတော့ရှိနေတာပါဘဲ။
အခုတော့ခံလက်စနဲ့မို့ ခံနေရတာ ……. ဆိုတာလိုမဖြစ်စေချင်တော့ပါဘူး။
အဓိကကတော့ စစ်တပ်ပါပဲ …. အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းမယ်ဆိုရင် ကြိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို သုံးနိုင်ပါတယ် … မြန်မာ ပြည်သူလူထုက သွေးမနည်းပါဘူး…… အဲ ဒါပေမဲ့ သေနတ်နဲ့ ပစ်တာမျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ….
လူထု သဘောထားကို သိချင်ရင် အခု အသစ်တက်မဲ့ အစိုးရက ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတွေကို အပြည့်အဝသာ ပေးကြည့်ပါ။ သိရပါလိမ့်မယ် ……
သိပ်အများကြီး မပေးရင်နေပါ။ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်လောက်ဆိုရင်ကို လုံလောက်ပါတယ်။
စစ်တပ် ပစ်သတ်….တဲ့ ကာရန်ညီတယ်လေ….
ရိပ်ကနဲမြင်ရင် ပစ်မှာပဲ….. လှုပ်ကနဲဆိုပစ်မှာပဲ….